Xilliga Safarka Xagaaga wuxuu bilaabmayaa: Daboolida wajiga, Dukumiintiyada iyo Imaatinka Waqtiga Muhiimka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Xilliga Safarka Xagaaga wuxuu bilaabmayaa: Daboolida wajiga, Dukumiintiyada iyo Imaatinka Waqtiga Muhiimka ah
Airport • Jebinta Wararka Yurub • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dadka • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Safarka hawada xagaaga 2021 wuxuu u baahan yahay in si wanaagsan loo qorsheeyo. Gegada diyaaradaha ee Frankfurt waxay ku baaqeysaa taageero firfircoon oo rakaabka ah.
Dad badan ayaa u ooman inay soo nooleeyaan qorshayaashooda safarka. Baahida duulimaadyada, gaar ahaan, ayaa sii kordheysa. Maaddaama xilliga safarka xagaaga uu bilaabmayo, garoonka diyaaradaha Frankfurt ee Jarmalka ayaa filaya koror ballaaran oo tirada rakaabka ah waxayna rajeyneysaa inay soo dhaweyso ilaa 100,000 oo safar ah maalin kasta.
Marka la barbardhigo, xagaagii 2019 - kahor intaan la helin faafitaanka - mugga maalinlaha ugu badnaa wuxuu ka badnaa 240,000.
Fraport, oo ah shirkada maamusha garoonka diyaaradaha ee Frankfurt, ayaa si deg deg ah uga jawaabtay dib u celinta waxayna dib u furtay Terminal 2 si ay uga badbadato ciriiriga. Tallaabooyinka ka hortagga infekshinka, sida wejiga qasabka ah iyo ka fogaanshaha bulshada, ayaa weli ku sii jira. Si kastaba ha noqotee, rakaabku waxay u baahan doonaan inay ka ciyaaraan kaalintooda iyagoo si fiican u qorsheynaya safarkooda, isla markaana haysta dhammaan dukumiintiyada saxda ah ee gacanta.
Daniela Weiss oo ka tirsan kooxda maareynta terminaalka Fraport ayaa sharraxaysa: “Xitaa ka hor inta aan la helin faafka, safarka diyaaradaha wuxuu u baahan yahay u hoggaansamid xeerar kala duwan - kuwaa ayaa sii jiraya maanta. Laakiin shirkadda 'Covid-19' waxay aragtay isbeddello lagu sameeyay dhowr geeddi-socod, qaarkoodna waxay noqdeen kuwo waqti badan qaadanaya natiijadaas darteed. Weiss ayaa sharraxaysa, inkasta oo tirooyinku si aad ah u hooseeyaan marka la barbar dhigo sannadihii hore, haddana rakaabku waxaa laga yaabaa inay waqti badan ku qaataan safka: “Laakiin samaynta diyaar-garowga saxda ah, qof kastaa wuu caawin karaa inuu sii sugo ugu yaraan Waxaan dooneynaa inay safrayaashu badqabaan oo ay nastaan.
Socotada waxaa lagu dhiiri galiyay inay si joogto ah u hubiyaan shabakadaha garoonka diyaaradaha wixii cusbooneysiin ah
"Farriinta ugu weyn ee rakaabku xagaagan waa inay hubiyaan tilmaamaha lagu siiyay websaydhka garoonkayaga goor hore, iyo si isdaba joog ah," ayuu kula taliyay Weiss. Inay ku soo beeganto xilligii ugu sarreeyay ee soo dhowaanaya, www.frankfurt-airport.com wuxuu leeyahay muuqaal cusub: Kaaliyaha Safarka. Tani waxay ku xoojineysaa dhammaan macluumaadka muhiimka ah hal meel. Waxay ku soo bandhigeysaa talooyin, talo, iyo xeerar la taaban karo oo isku xigxiga, oo u dhigma isku xigxiga tallaabooyinka safarka rakaabka - laga soo bilaabo marxaladihii ugu horreeyay ee qorshaynta, xamuulka alaabada, abaabulka safarka garoonka diyaaradaha, iyo isu diyaarinta safarka soo noqoshada. Sida maareeyaha terminalku tilmaamay, hagitaanku waa ballaadhan yahay laakiin, marka la fiiriyo faafida, labadaba waa lama huraan iyo waxtar badan. Waxay ku nuuxnuuxsatay: “Xeerar badan ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan ogeysiiska gaaban. Marka sanadkaan, qof walba waxaa lagula talinayaa inuu si joogto ah u hubiyo wixii cusbooneysiin ah: Maxaan u baahanahay inaan sameeyo? Waraaqo noocee ah ayaan ubaahanahay? Sideen u dhaqmaa Jawaabahana way ku kala duwanaan karaan rakaabka ilaa rakaabka, iyadoo kuxiran qorshayaashooda safarka ee gaarka ah. ”
Dhammaan dukumiintiyada gacanta
Arrin muhiim ah ayaa ah dukumiintiyada safarka. Meelo badan oo la tagayo, kaliya baasaboor ama kaarka Aqoonsiga intaas ka dib kuma filnaan doono. Waxay kuxirantahay xaaladooda caafimaad shaqsiyadeed, rakaabku waxay ubaahan karaan cadeyn rasmi ah ee talaalka, soo kabashada, baaritaanka ama karantiilka - qoraal ama qaab elektaroonig ah. Dukumiintiyo badan waa in la soo bandhigaa marar kala duwan, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa in wax walba si wanaagsan loo abaabulo oo ay si fudud u helaan qoyska oo dhan, ”ayaa hoosta ka xariiqday Weiss. Tani waxay si gaar ah ugu habboon tahay baaritaanka iyo xakamaynta xuduudaha. Wadamo badan ayaa sidoo kale amar ku bixiya diiwaangelinta kahor gelitaanka. Tan waxaa badanaa lagu dhammaystiri karaa qaab elektiroonig ah.
Midig u xir, oo yaree shandadaha aad sidato
Sida Weiss ay iftiimisay: "Marka lagu daro shuruudaha cusub ee loo yaqaan 'Covid-19', shuruucda xamuulka ee hadda jira wali wey khuseeyaan waana inaan la iloobin." Xaaladdan sidoo kale, Kaaliyaha Safarka ee khadka tooska ah ayaa kaa caawin kara. Waxaa jira sharciyo gaar ah oo loogu talagalay waxyaabo badan, oo ay ka mid yihiin cabitaanno, daawo, nadiifiye gacmeed, badeecooyin khatar ah, elektaroonigga - gaar ahaan xirmooyinka batteriga, sigaarka elektaroonigga ah iyo bangiyada tamarta. “Waa cilmiyan kaligeed. Markaa waxaan runtii ku talinaynaa in rakaabku hubiyaan inay si sax ah u ogyihiin waxa iska leh meesha si looga fogaado lama filaanka xun iyo dib u dhaca nabadgelyada, ayay ku talisay. Intaas waxaa sii dheer: “Iftiinka safarka ayaa wax fududeynaya. U hogaansanaanta tilmaamaha shirkaddaada duulimaadyada ee ku saabsan shandadaha oo alaabada aad sidato ugu yaraan ugu yaraan ka dhig. Waxa ugu fiican oo dhan waa shay hal qofkiiba ah. Taasi waxay ka dhigan tahay dhib aad u yar oo adiga iyo shaqaalaha amniga haysata. ”
Qorshee safarkaaga garoonka diyaaradaha iyo waqtigaaga halkaas
Faafida darteed, dad badan oo rakaab ah ayaa u socda garoonka diyaaradaha halkii ay ka isticmaali lahaayeen gaadiidka dadweynaha. Kuwa doonaya inay gawaaridooda dhigtaan garoonka diyaaradaha inta ay safarka ku jiraan, waxaa lagugula talinayaa inaad horay u sii qabsato boos garaashka garaashka. Tani waxay suurtogal ka tahay internetka www.parken.frankfurt-airport.com. Rakaabku waa inay yimaadaan garoonka ugu yaraan laba saacadood kahor intaysan dhoofin, oo ay iska hubiyaan khadka tooska ah intaysan guriga ka bixin.
Inta garoonka diyaaradaha lagu jiro, wajiga daboolan waa in la xidho markasta. Waa inuu noqdaa FFP2 ama maaskaro qalliin, daboolaya labada af iyo sanka. Kuwani iyo waxyaabaha kale ee nadaafadda ayaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha oo dhan. Socotadu waa inay lahaadaan ugu yaraan hal waji oo waji ah.
Fududeynta xayiraadaha coronavirus waxay ka dhigan tahay in bakhaarro dheeri ah iyo makhaayado laga furay garoonka diyaaradaha Frankfurt. Rakaabka iyo booqdayaashu way hubsan karaan dhammaan badeecooyinka iyo adeegyada muhiimka ah, oo ay kujiraan cuntada iyo cabitaanka, daawooyinka aan lagaa iibsan karin, dukaamaysiga bilaa cashuurta ah, kireynta baabuurta iyo sarrifka lacagaha. Saacadaha furitaanka iyo helitaanka waxay ku xirnaan doonaan mugga rakaabka. Qof kasta oo raadinaya wax gaar ah waa inuu booqdaa websaydhka garoonka si uu u helo faahfaahin inta uusan imaan. Waxaa muhiim ah in la ogaado in cunnada iyo cabitaanka la oggol yahay garoonka diyaaradaha oo dhan - laakiin in wejiga la daboolayo waa in laga fogeeyaa oo keliya muddo gaaban, masaafad aamin ahna waa in loo hayaa kuwa kale.
Waa in taxaddar la mid ah laga yeesho tallaabooyin kale si looga hortago infekshinka, ayuu ka digay Weiss. Waxaan hirgelinay tallaabooyin dhowr ah, sida calaamadaha masaafadaada, mashiinnada nadaafadda gacanta, kuraasta xiran iyo shaashadaha. Laakiin rakaabkeenna ayay masuuliyadi ka saaran tahay inay fuliyaan. ”
Tijaabinta waxaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha oo dhan
Hadda waxaa ku yaal dhowr garoon tijaabo coronavirus garoonka diyaaradaha Frankfurt. Waxay ku kala jiraan labada boosteejo, iyo buundada lugaynaya ilaa xarunta tareenka masaafada dheer. Intaa waxaa sii dheer, sidoo kale waxaa jira ikhtiyaarka ah in lagu wado tijaabooyin iyada oo lagu darayo soo galitaanka iyo hoos u dhaca boorsada Terminal 1 fiidkii ka hor duulimaadka. Mar labaad, Kaaliyaha Safarka ee khadka tooska ah wuxuu bixin karaa faahfaahin dheeraad ah. “Si kastaba ha noqotee, imtixaanada qaarkood waa in horay loo sii qabsadaa waana inaad gunno sameysaa waqtiga dheeriga ah ee loo baahan yahay,” ayuu ka digay Weiss. Waxay ku soo gabagabeysay: “Ma raacday dhamaan tilmaamteenii? Markaa safar nasasho ah oo aad ku tageyso goobtaada fasaxa ah ayaa sugeysa. ”
3 kiis oo kale oo COVID-19 ah ayaa laga xaqiijiyay New Zealand
Jilayaasha Jilaa ee Filimka Dalxiiska Cusub ee loogu talagalay caasimadda UAE